रहेनन् कोबी ब्रायन्ट ! | Hamro Khelkud
एजेन्सी – बास्केटबलका दिग्गज खेलाडी कोबी ब्रायन्टको आइतबार क्यालिफोर्नियामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ । ४१ वर्षीय कोबीसहित उनको १३ वर्षीय छोरी जियाना पनि हेलिकप्टरमा सवार थिइन् । हेलिकप्टरमा रहेका ९ जना यात्री नै जीवित नरहेको स्थानीय पुलिसले जानकारी दिएको छ ।
कोबीको निजि सिकोर्स्की एस-७६ हेलिकप्टर बाक्लो कुहिरोका कारण पहाडमा ठोक्किएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । दुर्घटना हुनुअघि नै हेलिकप्टरले बेग्लै आवाज निकालेको स्थानीय प्रतक्ष्यदर्शीले बताएका छन् । १८ पटक एनबीए अलस्टार रहेका कोबी आफूले स्थापना गरेको माम्बा एकेडेमीमा प्रशिक्षणका लागि प्रस्थान गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो ।
स्थानीय समयअनुसार ९:०६ ना ओरेन्ज काउन्टीको जोन वेन विमानस्थलबाट उडेको हेलिपक्प्त्र अन्तिम पटक ९:४५ सम्म सम्पर्कमा रहेको थियो । उक्त हेलिकप्टर एल मोन्टेको स्यान ग्यब्रिएल भ्याली विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम थियो ।
को हुन् कोबी ?
बास्केटबलमा २० वर्ष बिताएका कोबीले आफ्नो खेल जीवनको पूरै समय लास एन्जेलस लेकर्सबाट खेलेका थिए । आफ्नो करीअरमा ५ पटक एनबीए उपाधि जितेका उनले सन् २०१६ अप्रिलमा संन्यास लिएका थिए । आफ्नो खेल जीवनमा उनी १८ सिजन अल स्टार टोलीमा पर्दै दुर्लभ सफलता हात पारे ।
यसबाहेक उनी सन् २००८ मा एनबीएको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भए । दुई पटक एनबीए फाइनल्सका एमभीपी रहेका उनले दुई पटक एनबीएको स्कोरिङ च्याम्पियन र दुई पटक ओलम्पिक च्याम्पियन समेत भए ।
सन् २००६ मा टोरन्टो राप्टर्सविरुद्ध ८१ अंक जोड्दै उनले एकै खेलमा सर्वाधिक अंक जोड्ने दोस्रो खेलाडी बनेका थिए । सन् २०१८ मा उनले आफ्नो बास्केटबलप्रतिको मायालाई समपर्ण गर्दै लेखेको ५ मिनेटको भिडियोले ओस्कार समेत जितेको थियो ।
कोबीको परिवारमा उनकी पत्नी भनेसा र अन्य तीन छोरीहरु नाटालिया, बियान्का र काप्री छन् । कोबीको निधनपछि विश्वभरबाट उनको निधनलाई लिएर शोकाकुल संदेश सामाजिक संजालमा देखिएको छ । अप्रत्याशित यस घटनाले विश्व बास्केटबलले एक हस्ती गुमाएको एनबीएले प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेको छ ।